Moto kurwa robhoti Fekitori - China Moto kurwisa robhoti Vagadziri, Vatengesi
RXR-YC25000BD Kuputika-chiratidzo chekudzimisa utsi pedza uye kuongorora robhoti
Chigadzirwa pfupiso Semhando yerobhoti yakakosha, RXR-YC25000BD kuputika-chiratidzo moto utsi hwekuona robhoti inotora lithiamu bhatiri magetsi senge magetsi, ayo anoumbwa nemutumbi we robhoti, muchina weutsi hweutsi, infrared kamera uye ruoko-rwakabata kure kudzora terminal. Irobhoti inorwisa moto inodzorwa kure neasina waya remote control. Inogona kuridza mashandiro ehutsi uye guruva, kupisa kupisa, kupisa utsi uye kupedza gasi mumoto kurwira uye kununura, izvo zvakakosha zvikuru kune im ...
RXR-Q100D moto wakangwara mvura mhute moto kudzima robhoti
Pfupiso YeSystem Semhando yerobhoti yakakosha, RXR-Q100D yakangwara mvura mhute moto yekudzimisa robhoti inotora lithium bhatiri sosi senge robhoti sosi, peturu injini senge pombi sosi sosi, uye kure kure kudzima moto kudzimisa robhoti neisina waya kure kutonga. Kutakura yakanyanya kumanikidza mvura mhute pfuti, yakanyanya kumanikidza mvura mhute ine basa rekutonhora kwepasirese, asphyxiation, kukanganisa emulsification uye kudzikisira sosi yemoto, pamwe nekuvharira kupisa kwemwaranzi uye kugeza utsi ...
RXR-MY120BD kurwisa moto uye irobhoti inopedza utsi
Tsananguro yechigadzirwa RXR-MY120BD kurwisa moto uye irobhoti inopedza utsi mhando yerobhoti yakakosha. Iyo inoshandisa lithiamu bhatiri simba sesimba sosi uye inoshandisa isina waya kure kudzora kure kure kudzora moto-kurwisa uye utsi-unopedza robhoti. Inogona kushandiswa mune akasiyana siyana makuru-epamhepo petrochemical mabhizinesi. Tunnel uye subways zviri kuwedzera. Oiri negasi, kubuda kwegesi ine chepfu uye kuputika, tunnel, kudonha kwepasi pevhu uye dzimwe njodzi dzinowanzoitika kune njodzi. Moto kudzima uye kupfungaira ...
RXR-MC200BD Kuputika-chiratidzo Moto Kurwisa Kuziva Robhoti
Tsananguro yechigadzirwa RXR-MC200BD kuputika-chiratidzo moto kudzimisa kucherechedza robhoti rudzi rweiyo yakakosha robhoti. Inoshandisa lithiamu bhatiri simba sosi yesimba uye inoshandisa waya isina waya kure kudzora kure kudzima moto unodzima robhoti. Robhoti rinonyanya kuverengerwa nemutumbi we robhoti, hombodo yemvura hombe-inoyerera, chiratidzo-chinoputika infrared mbiri-yekuona pani / kurereka, odhiyo uye vhidhiyo kuongororwa, huturu uye hunokuvadza kugona kwegesi, uye chiteshi chekubata chinobata ruoko. Izvo zvinoshandiswa ...
RXR-MC120BD Kuputika-chiratidzo Moto Kurwisa Kuziva Robhoti
Tsananguro yechigadzirwa RXR-MC120BD moto kurwisa kudzora robhoti irobhoti rudzi. Inoshandisa lithiamu bhatiri simba sosi yesimba uye inoshandisa isina waya kure kudzora kudzora kudzima moto uye kupfungaidzira chiutsi robhoti. Inogona kushandiswa mune akasiyana siyana makuru-epamhepo petrochemical mabhizinesi. Tunnel uye subways zviri kuwedzera. Oiri negasi, kubuda kwegesi ine chepfu uye kuputika, tunnel, kudonha kwepasi pevhu uye dzimwe njodzi dzinowanzoitika kune njodzi. Kudzima moto uye kupfungaira ...
RXR-MC80BGD Kuputika-chiratidzo kupisa moto uye kuongorora robhoti
Chigadzirwa Nhanganyaya RXR-MC80BGD kuputika-chiratidzo moto kudzimisa yekuziva robhoti rudzi rweiyo yakakosha robhoti. Inoshandisa lithiamu bhatiri simba sosi yesimba uye inoshandisa waya isina waya kure kudzora kure kudzima moto unodzima robhoti. Inogona kushandiswa mumakambani akasiyana-siyana makuru epetrochemical, tunnel, subways, nezvimwewo, uko kune mafuta anowedzera uye gasi, kuputika kwemweya une chepfu uye kuputika, tunnel, subway kudonha uye dzimwe njodzi. Zvishandiso zvakakosha zvekununura pa ...
2-S RXR-MC80BD Kuputika-chiratidzo kupisa moto uye kuongorora robhoti
Ongororo RXR-MC80BD Kuputika-chiratidzo chekudzimisa moto uye kuongorora robhoti yakagadzirirwa uye yakasimbiswa yekudzimisa moto uye kuziva munzvimbo dzinoputika, senge kuchenesa petrochemical, oiri uye gasi yekuchengetedza gasi, uye kumwe kugadzirwa kwemakemikari, kuchengetedza, nzvimbo yekutakura, nezvimwe. kubatsira kugadzirisa kununura kuchengetedzeka uye kudzikisira vakaurayiwa mumishoni. Zvimiro 1. ★ Kuputika-chiratidzo chakasimbiswa; IP67 & IP68 2. ★ Track shandisa kupisa kushivirira, moto unodzora rabha nesimbi linin ...
RXR-MC40BD Kuputika-chiratidzo kwekudzimisa moto Medium yekuwedzera furo uye kuongorora robhoti 80D-3
Chigadzirwa ongororo RXR-MC40BD kuputika-chiratidzo moto kudzimisa yekuziva robhoti rudzi rweiyo yakakosha robhoti. Inoshandisa lithiamu bhatiri simba sosi yesimba uye inoshandisa waya isina waya kure kudzora kure kudzima moto unodzima robhoti. Inogona kushandiswa mumakambani akasiyana-siyana makuru epetrochemical, tunnel, subways, nezvimwewo, uko kune mafuta anowedzera uye gasi, kuputika kwemweya une chepfu uye kuputika, tunnel, subway kudonha uye dzimwe njodzi. Yakakosha michina yekununura panzvimbo ye ...
RXR-MC4BD Kuputika chiratidzo chemoto kurwisa yakakwira multiplex furo moto yekuona robhoti
Tsananguro yechigadzirwa RXR-MC4BD kuputika-chiratidzo moto-kurwisa yakakwira-yekuwedzera furo moto-kudzimisa yekutsvaga robhoti rudzi rweiyo yakakosha robhoti. Inoshandisa lithiamu bhatiri simba sosi yesimba uye inoshandisa waya isina waya kure kudzora kure kudzora moto-kurwisa robhoti. Ichi chigadzirwa chinogona kushandiswa kumakemikari akasiyana-siyana ane njodzi, makuru-matanho ezvivakwa, mafekitori, mabhizimusi emabhizimusi, migodhi, tunnel, subways, matura, hangars, ngarava uye zvimwe zvinonunura tsaona. Iyo pr ...
CHIDZIDZO CHOKUSANGISA Semhando yakasarudzika yerobhoti, RXR-M80D kudzimisa moto robhoti inoshandisa lithiamu bhatiri magetsi senge magetsi uye inoshandisa isina waya kure kudzora kudzima moto kudzima robhoti. Inogona kushandiswa mukati, kudzima moto robhoti kunoita chinhanho chakakosha pakununura uye kununura, kunyanya kutsiva vanodzima moto mumoto une njodzi kana hutsi moto nzvimbo yekununura yakakosha michina. Range rekushandisa Makuru-epamhepo petrochemical mabhizinesi, tunnel uye subway moto kununura Kununura ku t ...
RXR-M 30D moto kurwisa yakaoma poda moto kudzimisa robhoti
Chigadzirwa pfupisoRXR-M 30D moto kurwisa yakaoma poda moto kudzimisa robhoti sehupfu zvinhu kudzimisa robhoti senge jet poda yakaoma kana samende hupfu, uchishandisa lithium bhatiri magetsi senge magetsi, uchishandisa isina waya kure kudzora kudzora upfu zvinhu robhoti kubva kure chinhambwe. Kukwanisa kubatana nepoda rori uye pfapfaidzo poda kudzima moto. Inogona kushandiswa mune akasiyana siyana makuru petrochemical emakambani, tunnels, subways uye kumwe kuwedzera, gasi remafuta, gasi leakage a ...
RXR-C12BD kuputika-chiratidzo moto wekuziva robhoti
Tsananguro yechigadzirwa RXR-C12BD kuputika-chiratidzo moto wekutarisa robhoti rudzi rweiyo yakakosha robhoti. Inoshandisa lithiamu bhatiri simba sosi yesimba uye inoshandisa waya isina waya kure kudzora kure kudzora moto wekubvuma moto. Inogona kushandiswa mune akasiyana siyana makuru-epamhepo petrochemical mabhizinesi, tunnels, subways, nezvimwewo, uko kuwedzera huwandu hwemafuta, gasi, huturu hwegasi kubuda uye kuputika, tunnel, subway kudonha uye dzimwe njodzi dzinowanzoitika kune njodzi. Moto kudzima marobhoti p ...